Izintaba-mlilo eSpain: ziyini, zikuphi kanye nezici zazo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 11/10/2021 09:34 | I-Geology
Kunezintaba-mlilo eziningi eSpain, yize iningi lazo zitholakala eCanary Islands. Okungaziwa ngabantu abaningi ukuthi kunezintaba-mlilo eCatalonia, eCastilla la Mancha naseCiudad Real. Inezici ezithile ezikhethekile futhi zilele okwamanje. Kunezinhlobo eziningi zezintaba-mlilo eSpain futhi sizobona ukuthi ziyini izici zazo.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezintaba-mlilo ezahlukahlukene eSpain nokuthi yiziphi izici zazo eziyinhloko.
1 Izintaba-mlilo eSpain
1.1 U-El Teide eTenerife
1.2 AbaseTeneguía eLa Palma
1.3 UTagoro, u-El Hierro
1.4 UCerro Gordo, uCiudad Real
1.5 I-La Arzollosa, Piedrabuena (Ciudad Real)
1.6 ISan Juanma, iLa Palma
1.7 I-Enmedio, intaba-mlilo engaphansi kwamanzi phakathi kweTenerife neGran Canaria
1.8 IPico Viejo, iTenerife Island
1.9 ILos Ajaches, iLanzarote
1.10 I-Alto de la Guajara, iTenerife Island
1.11 ISanta Margarida, iGirona
1.12 ICroscat, Girona
U-El Teide eTenerife
Ngamamitha angu-3.715 XNUMX ngaphezu kogu lolwandle, ngokungangabazeki iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke eSpain nentaba-mlilo yesithathu ephakeme kunazo zonke emhlabeni. Kutholakala eTenerife (eCanary Islands), ivakashelwa abantu abayizigidi ezintathu minyaka yonke. Ukwakheka kwayo kwaqala eminyakeni eyi-170.000 edlule kanti ukuqhuma kokugcina kwenzeka ngo-1798.
AbaseTeneguía eLa Palma
Ngo-Okthoba 27, 1971, intaba-mlilo yaseSpain yaqhuma isikhathi sokugcina yabuya yazola ngoNovemba 28. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa zokunyakaza okukhulu komhlaba, ukuqhuma kokugcina kuqoshwe izolo. ITeneguía isesiqhingini saseLa Palma, ngaphansi kwamamitha ayi-1.000 XNUMX ngaphezu kolwandle. Akukho hlaza nxazonke.
UTagoro, u-El Hierro
Edolobheni laseLa Restinga (i-El Hierro), kwaqhuma intaba-mlilo engaphansi kwamanzi ngo-Okthoba 2011 yaqhubeka yaze yafika ngoMashi 2012. Eminyakeni emihlanu kamuva, ososayensi baqapha le ntaba-mlilo ngoba besaba ukuthi ingabuya ivuke ngamandla amakhulu.
UCerro Gordo, uCiudad Real
Intaba-mlilo iCerro Gordo itholakala phakathi kweGranátula neValenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Njengamanje iyigugu lokugcina umlando futhi ivulekele umphakathi kusukela ngo-2016. Ngesikhathi sokuvakasha, uzofunda ukuthi yakhiwa kanjani futhi uyakwazi ukubona indawo yonke le ndawo. Ingamamitha angama-831 ukuphakama. Intaba-mlilo iCampo Calatrava iwumsebenzi wentaba-mlilo ongaphakathi ohlobene nokwenyuka kwezintaba zaseBetic futhi ukufuduswa kwamapuleti ase-Eurasia nawase-Afrika. Kwaqala ngokuqhuma kwentaba-mlilo iMorrón de Villamayor de Calatrava eminyakeni eyizigidi eziyi-8,5 edlule. Ukuqhuma kwayo okokugcina kwenzeka e-Columba volcano eminyakeni engama-5500 eyedlule.
I-La Arzollosa, Piedrabuena (Ciudad Real)
Kungaba phakathi kweminyaka eyisishiyagalombili nesigidi ubudala futhi kuyingxenye yalokho okwakubizwa ngokuthi "indawo emaphakathi yentaba-mlilo." I-Piedrabuena, ehlobene nemifantu (iLa Chaparra, iColada de La Cruz neLa Arzollosa) edale imicimbi ebalulekile yentaba-mlilo. Isigaxa se-volcanic singamamitha ayi-100 ukuphakama futhi siqukethe ikakhulukazi i-slag encibilikisiwe. I-crater ivulekela eningizimu-ntshonalanga, empeleni, ngokuya ngezimpawu zayo zokuqhekeka, okugqame kakhulu kule ntaba-mlilo ukuqhuma okuyakhe futhi kwakha insimu ebaluleke kunazo zonke yokugeleza kwePajojo ePeninsula yase-Iberia.
ISan Juanma, iLa Palma
Itholakala endaweni yaseLas Manchas e-El Paso, eSanta Cruz de Tenerife, eLa Palma. Kwaqhuma ngoJuni 24, 1949, kwabhidliza amasimu nezindlu ngemva kokuba udaka seludlulile. Umphumela walokhu kuqhuma yiCueva de las Palomas, esanda kuqanjwa kabusha ngokuthi ithubhu lentaba-mlilo iTodoque. Intshisekelo yayo yesayensi ibaluleke kakhulu ngokuma komhlaba futhi ukubaluleka kwayo kokuphila kuye kwanda ngenxa yezilwane zayo ezingenamgogodla ezikhethekile.
I-Enmedio, intaba-mlilo engaphansi kwamanzi phakathi kweTenerife neGran Canaria
Iyisidlakela esinobubanzi obucishe babe ngamakhilomitha amathathu ezansi, futhi njengamanje awukho umsebenzi wokuqhuma. Kumamitha ayi-500 eningizimu-ntshonalanga yesakhiwo esikhulu sentaba-mlilo i-Enmedio, kunezigaxa ezimbili zesibili, ubude bazo abudluli kumamitha ayi-100 ukusuka olwandle. Ukuba khona kwale ntaba-mlilo kutholwe ngokunembile ngumkhumbi waseJalimane osolwandle iMeteor ngasekupheleni kweminyaka yama-1980, yize yaqala ukudonswa ngumkhumbi we-IEO uHespérides ngasekupheleni kweminyaka yama-1990. Imithambeka emikhulu yale ntabamlilo igqame kakhulu, kuguquka kuphela ezansi nentaba-mlilo.
Kumele kuqashelwe futhi ukuthi yinye kuphela yezigaxa ezimbili ezingamamitha ayi-100 ukuphakama eziseduze kwentaba-mlilo i-Enmedio, ehlukaniswe ukucindezeleka, eyaziwa. Intaba-mlilo i-Enmedio iseduze neTenerife kuneGran Canaria. Ngokuqondile, Itholakala cishe ngamakhilomitha angama-25 ukusuka endlini yesibani i-Abona namakhilomitha angama-36 ukusuka ethekwini laseLa Aldea de San Nicolás de Tolentino.
IPico Viejo, iTenerife Island
IPico viejo (amamitha ayi-3.100) yintaba-mlilo eseTenerife, kanye neMount Teide, Yizintaba ezimbili kuphela eziQhingini zaseCanary ezinokuphakama okungaphezu kwamamitha ayi-3.000 XNUMX. Inentaba-mlilo engu-800 metres ububanzi nokujula okuphezulu kwamamitha angama-225, kwake kwaba ichibi elihlaba umxhwele lodaka. NgeNkathi Ephakathi (1798), uPico Viejo waqala ukuthatha isinyathelo, okwadala ukuqhuma okungokomlando kweTenerife, okwenzeka ngaphakathi kwepaki. Yaxosha impahla yentaba-mlilo ezinyangeni ezintathu, yakha imiphimbo eyisishiyagalolunye, yadala ukuthi impahla emnyama ichitheke kuyo yonke ingxenye eseningizimu yeCaldera de Las Cañadas. Lolu chungechunge lwama craters ahlelwe ngokucophelela lubizwa ngeNarices del Teide. Iyingxenye yendawo yemvelo yeTeide National Park futhi yaziwa nangokuthi yiMontania Cha Hora.
Futhi kuyindawo yemvelo evikelwe futhi ingeyetshe lesikhumbuzo eliqukethe iqembu lezintaba-mlilo iTeide-Pico Viejo. Ukwakhiwa kwaso kwaqala cishe eminyakeni engama-200.000 edlule enkabeni yesiqhingi. Kumele kuqashelwe ukuthi i-magma kulula ukuyikhuphuka esiqhingini njengamanje, futhi ngoba le crater ithathwa njengelinye lama crater athakazelisa kakhulu eCanary Islands, ngenxa yezimo zayo ezihlukile zingumkhiqizo wokuvela kwayo.
ILos Ajaches, iLanzarote
ILos Ajaches yindawo enkulu yentaba-mlilo ehlala engxenyeni eseningizimu yesiqhingi. Le ndawo ebalulekile yamagugu okuvubukula itholakala edolobheni laseYaiza, lapho sithola khona imihume, okuqoshwe kanye nezinsalela zamadlelo asendulo. Le ndawo yingxenye endala yesiqhingi futhi isalinyazwe kakhulu ukuguguleka kwenhlabathi, imihosha okuwele kuyo lo mzila wemvelo eminyakeni eyizigidi eziyishumi edlule. ILos Ajaches itholakala eTimanfaya National Park. Isakhiwo seLos Ajaches sisuka ePunta del Papagayo endaweni eseningizimu kakhulu siye ePlaya Quemda enkabeni. Ziyizinsalela zentaba-mlilo kusukela eminyakeni eyizigidi eziyi-15 edlule. Ukuguguleka kolwandle kugugule ingxenye enkulu yomhlaba ongamamitha ayi-600. Ukuqhuma kokugcina kwaba yiminyaka eyizigidi ezintathu edlule.
I-Alto de la Guajara, iTenerife Island
Ngamamitha angu-2.717 ngaphezu kogu lolwandle, iyintaba-mlilo yesithathu ephakeme kakhulu eCanary Islands. Yakhiwa eminyakeni eyizigidi ezi-3 eyedlule. ITeide National Park ingumphelelisi weHawaii Volcanoes National Park; Lokhu ikakhulukazi kungenxa yokuthi ngamunye wabo umele lolu hlobo lwesiqhingi (IHawaii) kanye nesakhiwo esivele savela kakhulu futhi sahlukaniswa (i-Ted) se-magma nefomu lentaba-mlilo elingaqhamuki kakhulu. Ngokombono womhlaba, iTeide National Park inezici ezifanayo neGrand Canyon National Park (Arizona, USA).
ISanta Margarida, iGirona
Edolobheni lase-Olot eGirona, sathola intaba-mlilo iSanta Margarida. Ngokubukeka, akuhlangene nakancane nokwedlule. Okugqama kakhulu ukuthi kukhona ukubuyela emuva ngaphakathi komgodi.
Esifundeni saseLa Garrocha yilo mlilo waseStrombolian. Ngokuqondile, itholakala eGarrotxa Volcanic Belt Natural Park, lapho kunezigaxa ezingama-40 zentaba-mlilo nokugeleza kwama-lava angama-20. Kubhekwe njengencane kunazo zonke, kepha ibilele kusukela ukuqhuma kokugcina kwenzeka eminyakeni eyi-11.500 XNUMX edlule.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezintaba-mlilo eSpain nangezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Izintaba-mlilo eSpain